कांग्रेसले स्वास्थ्य महोत्सव आयोजना गर्ने
इटाभट्टा । नेपाली काँग्रेसले मेचीनगर १२ स्थित इटाभट्टामा प्रथम स्वास्थ्य महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ ।
महोत्सवस्थल एफएम मेची ट्युन्सको कार्यालय पश्चिमतर्फ मङ्गलबार काँग्रेसले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यही माघ ८ देखि १५ गतेसम्म स्वास्थ्य महोत्सव सञ्चालन गरिने जनाएको हो ।
उपचारमा गम्भीर लापरबाही, क्षतिपूर्ति दिएर लुकाइन्छ तथ्य
स्तरीय र सुरक्षित उपचारका लागि आफ्नो आर्थिक हैसियतबाहिर गएर सुविधासम्पन्न तथा महँगा अस्पतालमा जानेको संख्या बढ्दो छ। रोगबाट मुक्तिको त्यो चाहनामा चिकित्सक भगवान् र अस्पताल एकमात्र आस्थाको केन्द्र बन्न जान्छ, बिरामी र उनका परिवारका लागि।
लापरबाहीयुक्त उपचारको घटनामा वृद्धि भएको तथ्यांकले
सेक्स कतिबेला र कतिपटक गर्ने !
सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा
विवादास्पद माकाजुलाई फेरी उपकुलपति बनाउन चलखेल
मेडिकल कलेजलाई नियमविपरीत सम्बन्धन दिएर विवादमा तानिएका काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.रामकण्ठ माकाजुलाई पुनः उपकुलपति बनाउने चलखेल सुरू भएको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिस विपरित पूर्वाधार नपुगेको विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर
डेंगुका बिरामी दिनहुँ अस्पताल धाउँदै
तोपगाछी । करिब दुई महिना अघि झापाको दमकमा फैलिएको डेंगु अझै नियन्त्रणमा नआएको दमकका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीले बताएका छन् ।
दमक नगरपालिकालगायत आसपासका क्षेत्रमा फैलिएको डेंगु संक्रमित बिरामी अहिले पनि परीक्षण गराउन आइरहेका दमक अस्पतालका ल्याव इञ्चार्ज राकेश सिंह
नेपालमै कलेजोको सफल प्रत्यारोपण भएको छ । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा बुधबार एक किशोरमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो।
पहिलोपटक कलेजोको सफल प्रत्यारोपण भएको पुष्टि गरे पनि अस्पतालले विस्तृत जानकारी गराएको छैन । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले बिहीबार पत्रकार
लखनपुरमा गाउँ घर क्लिनिक सञ्चालन गरिने
दमक । झापाको लखनपुर ४ स्थित निर्माणाधिन क्षेत्रीय आयूर्वेदिक चिकात्सालयमा गाँउघर क्लिनिक शुरु हुने भएको छ ।
यही मंसीर २८ गते बृहत निशुल्क आयूर्बेदिक स्वास्थ्य शिविरको आयोजनासंगै महिनाको दुई दिन आयूर्बेदिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बिस्तारका लागि गाँउघर क्लिनिक सञ्चालन हुन लागेको हो ।
ग्रान्डी र बीएन्डबीविरुद्ध क्षतिपूर्ति मुद्दा
उपचारका क्रममा अस्पताल र चिकित्सकबाट गम्भीर लापर्बाही भएको भन्दै उपत्यकाका नाम चलेका दुई ठूला अस्पतालविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको छ । राजधानीको धापासीस्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल र ललितपुरको ग्वार्कास्थित बी एन्ड बी अस्पतालविरुद्ध क्षतिपूर्तिको मागदाबीसहित
तर अब भने वैज्ञानिकहरुले चरम सुख, यसको जटिलता तथा यसको समस्यामाथि पहिलेको
केसीको २२ दिन लामो अनसन तोडियो
काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच १२ बुँदे सहमति भएको छ । र, केसीले २२ दिनदेखि लामो अनसन तोडेका छन् । भूकम्पमा परेका अढार्इ बर्षीया बालिका मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिउँदै डा. केसीले अनसन तोडेका हुन् ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा डीन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति लगायतका १० बुँदे माग